आईओएस को लागी SpeechMaker | बेर आश्चर्यजनक
IOS को लागी SpeechMaker
SpeechMaker - सिर्जना गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, रेकर्ड गर्नुहोस् (अडियो, भिडियो), सुन्नुहोस्, संग्रह गर्नुहोस् र महान भाषण दिनुहोस्
अनुप्रयोग जसले तपाईको आईफोन वा आईप्याडलाई मोबाइल पोडियम, स्पिचराइटर, प्रो टेलप्रोम्प्रिटर, भिडियो रेकर्डर, टाइमर र सार्वजनिक बोल्नेको लागि अभिलेखमा परिणत गर्दछ। तपाईंको लाइनहरू निर्दोष र समयमा डेलिभर गर्नुहोस्। तपाइँका सबै नोटहरू, भाषणहरू, नाटकहरू एक ठाउँमा राख्नुहोस्। ट्र्याक राख्नुहोस् र भाषण भाषणहरू, कविताहरू, व्याख्यानहरू, नाटकहरू, प्रवचनहरू, स्टार्टअप पिचहरू र कमेडी। टोस्टमास्टरहरू, विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, कविहरू, अभिनेताहरू, निर्देशकहरू, पोडकास्टरहरू र संगीतकारहरूको लागि उत्कृष्ट। जसले जनतासामु बोल्छ उसले राम्रो गर्छ।
"कम मूल्यको SpeechMaker एपले प्रयोगकर्ताहरूलाई भाषणहरू बनाउन, जाँच गर्न, रिहर्सल गर्न, रेकर्ड गर्न र समय भाषण गर्न मद्दत गर्छ। प्रसिद्ध भाषणहरूको ठूलो सङ्ग्रह समावेश गर्दछ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, व्यावसायिक रूपमा तपाइँको आफ्नै सिर्जना गर्ने र डेलिभर गर्ने उपकरणहरू।" - ग्राहम के रोडर्स, एक्सटेन्सनमा समीक्षा, //8०/१।
सिर्जना गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, संग्रह गर्नुहोस् र भाषण दिनुहोस् - स्पीचमेकर तपाईंको आईफोन / आईप्याड वा एन्ड्रोइड उपकरणलाई मोबाइल पोडियम, नोटबुक, अभिलेखको अभिलेख र सार्वजनिक भाषणको लागि पेशेवर टेलीप्रोम्प्टर बनाउने सफ्टवेयर हो।ग्रहम के रोडर्ड्स //8०/१। द्वारा एक्सटेन्सनहरूमा समीक्षा* २०१N को CNN र शीर्ष शिक्षा अनुप्रयोगमा प्रशंसा गरियो *यसलाई एप्पल आईट्यून्स अनुप्रयोग स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस्।भाषणका अतिरिक्त यसलाई कविता, गीत, लिपि, कमेडी, व्याख्यान, प्रवचन, र/वा नाटकहरू समात्न र पढ्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। भिडियो समीक्षा यहाँ हेर्नुहोस्। दैनिक अनुप्रयोग शोअब तपाईं अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ र सुन्नुहुन्छ तपाईंले महत्वपूर्ण ध्वनि दिनु अघि वा नाटकमा लाइनहरू वितरण गर्न वा कविता पढ्न वा व्याख्यान दिन अघि कस्तो आवाज सुन्नुहुन्छ। तपाईंको भाषणको तालिका र प्रवाहको लागि भावना प्राप्त गर्नुहोस्।म्यानुअल / मद्दतSpeechMaker विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, राजनीतिज्ञहरू, कविहरू, व्याख्याताहरू, मन्त्रीहरू, लेखकहरू, नाटककारहरू, भाषण लेखकहरू, पटकथा लेखकहरू, टोस्टमास्टरहरू, हास्य कलाकारहरू, गायकहरू र अभिनेताहरूमाझ धेरै लोकप्रिय छन्। SpeechMaker ले सबै प्रकारका वक्ताहरूलाई सिर्जना गर्न, अभ्यास गर्न, सुन्न र भाषण दिन आवश्यक पर्ने सबै कुरा दिन्छ। यसले शीर्षक, लेखक, मिति र अडियो रेकर्डिङहरू जस्ता थप जानकारीका साथ हजारौं भाषणहरू संग्रह गर्न सक्छ। SpeechMaker निर्मित धेरै प्रसिद्ध भाषणहरूको साथ आउँछ।
SpeechMaker प्रयोग गर्दै
इतिहासमा सब भन्दा राम्रो भाषण अभिलेख गर्नुहोस्। मास्टरबाट सिक्नुहोस्।
तपाईंको बोली सिर्जना गर्नुहोस् वा पाठ, RTF वा PDF ड्रपबक्स वा गुगल कागजातको रूपमा आयात गर्नुहोस्।
Loud 36 विभिन्न भाषाहरूमा सिरि प्रयोग गरेर ठूलो स्वरमा बोलिने पाठलाई रूपान्तरण गर्नुहोस्। तपाइँको बोलीले कस्तो आवाज निकाल्छ छिटो स्वाद लिनुहोस्।
तपाईंको बोली अभ्यास गर्नुहोस् र अडियो रेकर्ड गर्नुहोस्। तपाईंको बोली, समय र प्रदर्शन सुधार गर्न प्रतिक्रियाको रूपमा रेकर्डि Listen सुन्नुहोस्।
तपाईका लाइनहरू निर्दोष रूपमा वितरण गर्न अभ्यास गर्नुहोस्, एक मिरर र स्पीचमेकर प्रयोग गर्नुहोस्।
सजिलै समायोज्य अटोस्क्रोल प्रयोग गरेर तपाईंको भाषण दिनुहोस्। स्पष्ट रूपमा तपाईको फन्ट, आकार र पृष्ठभूमि रंग को छनौट मा भाषण स्क्रोलिंग हेर्नुहोस्। समय, बितेको समय र समय एकै नजरमा भाषणको लागि जानुहोस्।
तपाइँको भाषणलाई पाठ र अडियोको रूपमा अभिलेख राख्नुहोस् तपाइँ सुधार गर्न जारी राख्न मद्दत गर्न। ऐतिहासिक उद्देश्यका लागि अभिलेख राख्नुहोस्।
साथीहरु, सहकर्मीहरु र फेसबुक संग तपाइँको भाषण साझा गर्नुहोस्।
SpeechMaker अधिक शक्तिशाली तब महँगो टेलीप्रोम्प्टर हो।SpeechMaker सुविधाहरू
सार्वजनिक बोली र व्याकरण को लागी महान शैक्षिक अनुप्रयोग।
दुबै आईओएस र एन्ड्रोइडमा चल्दछ।
आईओएस for का लागि सुन्दर UI र समतल ग्राफिक्स।
DropBox, Google ड्राइभ, र प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस् र iTunes फाइल साझेदारीको माध्यमबाट पाठ, rtf, र pdf आयात गर्नुहोस्।
ईमेल मार्फत बोली पाठ निर्यात गर्नुहोस्।
ड्रपबक्स मार्फत अडियो आयात र निर्यात गर्नुहोस्।
अडियो रेकर्डिंग तपाईंलाई प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न को लागी तपाइँ आफ्नो भाषण अभ्यास अभ्यास गर्दछ।
टेलिप्रोमिटरले जस्तै तपाईंको भाषणलाई सहि वेगमा स्वतन्त्र गर्नुहोस्।
स्मार्ट उपकरण सुन्नुहोस् ठूलो स्वरले बोल्नुहोस् जब यसले स्क्रोल गर्दछ र प्रत्येक रेखा हाइलाइट गर्दछ।
D 36 बिभिन्न भाषाहरू र सिरी ध्वनि मध्ये एकबाट छान्नुहोस्।
बटनको फ्लिपको साथ विभिन्न रंगहरूमा हाइलाइट क्रिया, संज्ञा, विशेषण र भाषणको अन्य भागहरू हेर्नुहोस्।
कागजातको रूप परिवर्तन गरेर, पृष्ठभूमि र ,्ग, फन्टहरू, स्क्रोल गति, फन्ट आकार नियन्त्रण गर्नुहोस्।
बटनहरू र इसारावहरू सुरू गर्न, रोक्न र स्क्रोल गति नियन्त्रण गर्न।
चिमोटि वा जूम फन्ट आकार परिवर्तन गर्न
समात्नुहोस् र एक भाषणको कुनै पनि भागमा तुरून्त सार्नुहोस्
स्क्रोलिंग गति गर्न दायाँ तिर ट्याप गर्नुहोस्। स्क्रोलि slow्ग ढिलो गर्न बाँया तिर ट्याप गर्नुहोस्।
एक झलकमा एक भाषण शोको लागि समय, बितेको, बाँकी, अनुमानित समय।
एप्पलटीभी जडित एचडी मोनिटरहरू टिभी स्टेशनहरू, स्टुडियोहरू, अडिटोरियमहरू, पोडकास्टरहरू, लेक्चर हल र नाटकहरूको लागि प्रदर्शन गर्नुहोस्।
पढ्नुहोस्, सही गर्नुहोस्, दिनुहोस्, प्ले गर्नुहोस् र भाषणहरू कुनै पनि समय र कहीं पनि रेकर्ड गर्नुहोस्। नेपकिन वा अनुक्रमणिका कार्डहरूमा नोटहरूमा भर पर्नु पर्दैन। आफ्नो भाषणहरू सधैं आफूसँग राख्नुहोस्, सुरक्षित र कुनै पनि क्षणमा प्रयोग गर्नको लागि उपलब्ध। सजिलै परिवर्तन गर्नुहोस् र अन्तिम मिनेटमा भाषण दिनुहोस्।प्रयोगकर्ताहरू रेभ"मेरा सबै भाषणहरू एक सुविधाजनक र प्रयोग गर्न सजिलो उपकरणमा बोक्नाले मेरो विवेक बचत हुन्छ। स्पीचमेकर मेरो प्रयोगको लागि सजिलो छ र म यो प्रेम गर्दछु कि म स्क्रिनमा कसरी देखिन्छ भनेर सबै पक्षहरू नियन्त्रण गर्न सक्छु। मैले मेरी श्रीमतीलाई सोच्न पहिले कि भाषण कस्तो आवाज आउँदछ, अब म भाषण रेकर्ड गर्छु जब सम्म मसँग यो छैन ठीक हो त म मेरी श्रीमतीलाई उनी के सोच्छे भनेर सोध्छु। सयौं बर्षमा स्पिचमेकर यो पुरानो कलाको लागि उत्तम कुरा हुन्छ। "
बाँया सेट सिरी सेटिंग्स भ्वाईस, पिच, भोल्यूम र गति माथि। दाँयामा कसरी भाषणको अंशहरू हाइलाइट गर्ने।
सबै भाषाहरू, दायाँ देखि बाँया र बायाँ देखि दायाँ र विशेष क्यारेक्टरहरू समर्थन गर्दछ।
टाइमर प्रदर्शन वास्तविक, बितेको, अनुमानित र बाँकी समय हेर्नको लागि सजिलो।
भाषणको कुनै पनि भागमा सार्नुहोस्।
लाइभ वा सम्पादन मोडमा तत्काल फन्ट आकार परिवर्तन गर्नुहोस्।
भाषणको पाठ सम्पादन गर्नुहोस् र फन्ट, आकार, आदि परिवर्तन गर्नुहोस्।
केहि प्रसिद्ध भाषणहरु को साथ आउँछ। अभिलेखमा तपाईंको आफ्नै भाषणहरू थप्नुहोस्।
सफ्टवेयर नम्बर सम्म र गणनाको साथ गणना गर्दछ।
आईफोन / आईप्याड र एन्ड्रोइडका लागि उपलब्ध
SpeechMaker एक मोबाइल पोडियम जस्तै छ। तपाईंको सबै भाषणहरूको साथ एक टेलीप्रोमिटर।
वेग वा धीमा गर्न ट्यापको साथ स्वचालित स्क्रोल नियन्त्रण गर्नुहोस्।
प्रसिद्ध भाषणहरू खेल्नुहोस् वा आफ्नै रेकर्ड गर्नुहोस्।
समायोज्य भोल्युम, पिच र 36 XNUMX भाषाहरूमा गतिमा एक भाषण सुन्नको लागि SIRI प्रयोग गर्नुहोस्।
सम्पादन मोडमा भाषणको फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस्।
टेलिप्रोमिटर किन प्रयोग गर्ने?
टेलिप्रोम्प्टरले कसैलाई पनि समाचार एन्करको जस्तो देखिन्छ। तिनीहरू एch्कर, प्रतिभा र वा राष्ट्रपति क्यामेरा मा सीधा हेर्न, स्क्रोलिंग पाठ पढ्न र श्रोताको साथ कनेक्ट हुन अनुमति दिन डिजाइन गरिएको हो। तल वर्तमान टेलिप्रोमिटर जस्तो देखिन्छ। दुई पक्षमा टेलि प्रम्प्टरले राष्ट्रपतिलाई उक्त भाषण हेर्न र दुवै पक्षका मानिसहरूसामु उसको आँखामा सम्पर्क राख्न अनुमति दिन्छ।
तपाईलाई तुरुन्तै एक अव्यवसायिक भिडियो थाहा छ जब तपाइँ कसैले क्यामेराको एक छेउमा हेरिरहेको देख्नुहुन्छ, यो अप्राकृतिक देखिन्छ। तिनीहरू तपाईंसँग सीधै बोलिरहेका छैनन्। कसैको आँखामा हेरे जस्तै यसले तपाईंको ध्यान खिच्दैन। तपाईंलाई थाहा छ जब कसैले भन्छ 'यो ऐनाबाट भयो' तिनीहरूले कुनै प्रकारको जादूलाई संकेत गरिरहेका छन्। Teleprompters अपराध शोहरूमा जस्तै एकतर्फी ऐनामा आधारित जादू हो। यस्तो अवस्थामा क्यामेराले एकतर्फी वान वे मिरर मार्फत खिच्दछ र अर्कोतिर पाठकको लागि पाठ प्रतिबिम्बित हुन्छ। आफ्नो भाषणलाई अर्को तहमा लैजानुहोस्। टेलिप्रम्प्टरहरू धेरै महँगो र धेरै भारी हुन्छन्। राष्ट्रपतिको एक हजारौं डलर छ र धेरै जसो $ 500+ हो र मुख्यतया यो एकतर्फी दर्पण हो। सौभाग्यवश, अहिले त्यहाँ धेरै 'यस आफैं गर्नुहोस्' परियोजनाहरू छन्। यो हार्डवेयर र स्पीचमेकर बनाउन जसले कसैलाई व्यक्तिगत टेलिप्रम्प्टर बनाउन अनुमति दिन्छ जुन पहिले अवस्थित कुनै पनि चीजको तुलनामा हल्का, सस्तो र राम्रो छ। अझ भाग्यशाली त्यहाँ अब आईफोन, आईप्याड, एन्ड्रोइड र अन्य ट्याब्लेटहरू छन् जसले तपाईंलाई आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा SpeechMaker बोक्न र प्रयोग गर्न दिन्छ। teleprompter सफ्टवेयर कुनै पनि समय र कहीं।
टोस्टमास्टर्सबाट टेलीप्रम्पटरलाई टेमि forका लागि सुझावहरू
टेलिप्रोमिटरलाई मास्टर गर्ने यो कतै सजिलो देखिन्छ जस्तो देखिन्छ, र उचित प्रविधिको प्रयोग नगरी स्टिल्ट्ड वा इन्सिडर देख्न सजिलो हुन्छ। प्रस्तुतीकरण-कौशल कोच लउरी ब्राउनले टिलप्रोम्प्टरलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न यी सुझावहरू प्रदान गर्दछ:
प्रम्प्टरको गति नेतृत्व गर्नुहोस्। तपाईंको पठन गति स्क्रोलको गति नियन्त्रण गर्नु पर्छ। यदि प्रम्प्टर अपरेटर अग्रणी छन् भने, रोक्नुहोस् उनीहरूलाई ढिलो वा वेगको लागि अनुमति दिनुहोस्।
पढ्दा तपाईको टाउकोलाई छेउबाट अर्को छेउमा न सार्नुहोस्। यदि तपाइँ आफैंले यो गरिरहनु भएको छ भने, प्राय: यस स्क्रिप्टको फन्ट साइज प्रम्प्टरमा गलत छ र वाक्यहरू धेरै लामो छन्।
स्वाभाविक रूपमा बोल्नुहोस्। स्क्रोलिling सामग्री मात्र नपठाउनुहोस्। सानो इंटरजेसनहरू वा विज्ञापन-लिब्स थप्नुहोस् जहाँ यो प्राकृतिक देखिन्छ, र तपाईंको अपरेटरलाई पहिले सूचित गर्नुहोस् कि तपाईंले त्यसो गरिरहनु भएको छ। यदि तपाईं व्यक्तिगत कथाहरू प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, उनीहरूलाई मेमोरीबाट बताउनुहोस् - स्क्रिप्टबाट उनीहरूलाई शब्दशब्द नपठाउनुहोस्। anchorman1.jpg
मोनिटरमा तपाईंको आँखाको सम्पर्क जाँच गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं स्क्रिनको बिचमा पढ्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं धेरै उच्च पढ्नुहुन्छ भने, यसले तपाईंलाई श्रोतालाई नराम्रो देखिनेछ, तपाईंको नाक माथि हावामा। यदि तपाईं एकदम कम पढ्नुहुन्छ वा तल हेर्नुहुन्छ भने, यसले तपाईंलाई रीस उठाउन सक्छ।
नहेर्नुहोस् सास फेर्नुहोस् र स्वाभाविक रूपमा झिम्काउनुहोस्। कहिलेकाँही प्रम्प्टरबाट टाढा नहेर्नुहोस् - यसले तपाईंलाई पढ्नको सट्टा सोचिरहेको जस्तो लाग्नमा मद्दत गर्दछ।
एक व्यक्ति को रूपमा टेलीप्रोम्पटर हेर्नुहोस्। एक व्यक्तिलाई कल्पना गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई वास्तवमै शब्दहरूको पछाडि हुन्छ। यो तपाईंलाई तपाईंको आवाज र अनुहारको भाव अभिव्यक्त गर्न मद्दत गर्दछ।
स्थिर रहेकोमा काम गर्नुहोस्। ब्राउन भन्छन्, "क्यामेरामा स्थिरता आवश्यक छ।" यसको मतलब यो होइन कि तपाई कठोर हुनुहुन्छ वा भावनात्मक छैनन्, तर तपाईको माथिल्लो शरीर स्थिर रहनेछ। " स्पिकरहरू क्यामेरामा भित्र र बाहिर जान्छन्, जुन "एक नराम्रो 3-D चलचित्र जस्तो देखिन्छ," उनी भन्छिन्।
सबै भन्दा माथि, कठोर अभ्यास गर्नुहोस् र तपाईंको सामग्री आन्तरिकृत गर्नुहोस्। धेरै स्पिकरहरू सोच्दछन् कि उनीहरूले प्रम्प्टरको प्रयोग सीधा वा कुनै अभ्यासको साथ प्रयोग गर्न सक्दछन्। यसको पखेटाउन कोशिस गर्नु सामान्यतया प्रकोप हुन्छ। साथै, ठूलो स्वरमा रिहर्सल गर्न नबिर्सनुहोस्, किनकि शब्दहरू तपाईंको टाउकोमा बोल्दा भन्दा फरक हुन्छ। तपाईंको अपरेटरसँग रिहर्सल गर्नुहोस् ताकि ऊ वा उनी तपाइँको बोल्ने गति थाहा छ।
सार्वजनिक बोलीको लागि थप सल्लाहहरू
लेख्नुहोस् र हामीलाई तपाईंको मनपर्ने बोल्ने सल्लाहहरू थाहा दिनुहोस्।
MM साधारण भोकल नेताहरूले लिन्छन्।
- अब सबै ऐतिहासिक भाषण हटाउन सक्नुहुन्छ
- प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस को लागी सुधार
-ड्रोडबक्स समस्या केहि प्रयोगकर्ताहरूको लागि निश्चित
-Created सदस्यता संस्करण
- आईफोनमा स्पिकर वा रिसीभर मार्फत सिरीलाई बोल्ने विकल्प।
धन्यबाद। कृपया सुझावहरू राख्नुहोस्।
[स्थिर] प्रदर्शनमा अन्तिम रेखा आंशिक रूपमा कभर गरिएको थियो।
राम्रो प्रतिक्रिया को लागी धन्यवाद! कृपया सुझावहरू राख्नुहोस्।
- रेकर्ड भिडियो र / वा तपाईंको स्पिच, प्रवचन, गीत, कविता, संगीत, आदि को अडियो।
- भिडियोको लागि यूआई परिवर्तन, सिरिको लागि यूआई परिवर्तन, धेरै धेरै यूआई परिवर्तनहरू
- विश्व प्रसिद्ध प्रवचनको १०००+ डाटाबेस खोजी गर्नु छिटो र सजिलो छ।
- ड्रपबक्सको नयाँ संस्करणको साथ काम गर्दछ।
- पहिलो संस्करण।
- [नयाँ] ट्याबलेटका लागि पोर्ट्रेट अभिविन्यास समर्थित छ
- [बग] भाषण (es) को TTS सेटिंग्स परिवर्तन गर्दा, पिच गति र भोल्युम नियन्त्रण विकल्प केही उपकरणहरूमा देखिएनन्
- [बग] TTS सामसु G ग्लेक्सी ट्याब 4,7"ट्याब्लेटमा काम गरिरहेको थिएन यदि Google Text-to-Speech इंजिन चयन गरिएको थियो।
- प्रमुख नयाँ संस्करण!
- रेकर्ड भिडियो र / वा तपाईंको संगीत, स्पिच, प्रवचन, आदि को अडियो।
- भाषणको १०००+ डाटाबेसमा खोजी गर्न छिटो र प्रयोग गर्न सजिलो छ।
- drobox पहुँच अपडेट गरियो।
- धेरै अधिक परिवर्तन र अनुकूलन।
- अब गुगल ड्राईवबाट PDF फाईलहरू पढ्न सक्छ। यो पहिले नै DropBox बाट पीडीएफ को पढ्छ
- इन्टरफेस परिवर्तनहरू
- सानो नाम परिवर्तन
- म्यानुअल परिवर्तनहरू
- १०००+ वटा भाषणले खोज समावेश गर्दछ।
- अब ब्लुटुथ, अर्को आईओएस उपकरण मार्फत नियन्त्रण, मिररिंग, आदि सहित धेरै व्यावसायिक विकल्पहरूको साथ टेलप्रोम्प्टरको रूपमा कार्य गर्दछ।
- अर्को आईओएस उपकरणबाट स्क्रोलि ofको ब्लुटुथ नियन्त्रण।
- ui मा सुधार
- अब भाषणको लागि आवाजमा निर्मित आईओएस प्रयोग गर्दै
- गतिमा सुधार
- भर्खरको xcode 7.3 संग कम्पाइल
- स्थिर ड्रपबक्स
- धेरै अन्य परिवर्तनहरू
- तपाईंको सुझावहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छन्। कृपया तपाईंको प्रतिक्रिया ईमेल गर्नुहोस्।
- ठूलो परिवर्तनहरू।
- अब आईप्याडका साथै आईप्याडमा काम गर्दछ
- सबै आवाजहरू र languages ​​36 भाषाहरूको लागि भाषणमा एप्पलले नवीनतम पाठ प्रयोग गर्दछ।
- वाणी संश्लेषण को अधिक नियन्त्रण।
- दुबै आईफोन र आईप्याडमा सुन्दर फ्लैट आईओएस graph ग्राफिक्समा अपडेट गरियो।
- पछिल्लो एक्स-कोडको साथ संकलित।
- धेरै फिक्सहरू।
- गुगल र ड्रपबक्स कनेक्शन, आयात / निर्यात अपडेट।
- rtf र pdf ढाँचा अब समर्थित छ।
- अब परिदृश्य र पोर्ट्रेट अभिमुखिकरण समर्थन गर्दछ।
- म्यानुअल अपडेट गरियो।
- सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई धन्यवाद। कृपया सुझावहरू राख्नुहोस्।
- अब बोलीको अंश देखाउँदछ। दायाँ GR मा बटनले (व्याकरणको लागि) संज्ञा, क्रिया, आदि देखाउँदछ विभिन्न रंगमा हाइलाइट।
- अनुमानित भाषण समय लेबल जोडियो। समय = words_count / २.2.72२।
- भाषण अवधि परिवर्तनमा निश्चित क्र्यास
- भाषण अवधि पिकरमा घण्टा थपियो
- घुमाव संग निश्चित बगहरू
- स्पिचस विन्डोलाई स्पीचको गुण दृश्य दृश्य ठीक गर्न विस्तार गरियो
मद्दत विन्डोको साथ स्थिर बग
- हामी किनारहरूमा मात्र 'अटोस्क्रोल' बटन धकेल्न सक्दछौं। अब हामी गर्दैनौं।
- रिकर्डिंग प्लेब्याक तर्क सही गरियो
- प्रत्यक्ष मोड चालु र रेकर्डि window विन्डो काम अब एक अर्काबाट स्वतन्त्र छन्
- अन्य साना मुद्दाहरू
बेर आश्चर्यजनक द्वारा
सिर्जना गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, संग्रह गर्नुहोस् र भाषण दिनुहोस् - स्पीचमेकर तपाईंको आईफोन / आईप्याड वा एन्ड्रोइड उपकरणलाई मोबाइल पोडियम, नोटबुक, अभिलेखको अभिलेख र सार्वजनिक भाषणको लागि पेशेवर टेलीप्रोम्प्टर बनाउने सफ्टवेयर हो।
भाषणको साथसाथै यसलाई धारण गर्न, अभ्यास गर्न र कविताहरू, गीतहरू, स्क्रिप्टहरू, कमेडी, व्याख्यानहरू, प्रवचनहरू, नाटकहरू, आदि पढ्न प्रयोग गर्दछ।
स्पीचमेकर विद्यार्थी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, निर्देशक, कवि, व्याख्याता, मन्त्री, लेखक, नाटककार, भाषण लेखक, पटकथा लेखक, टोस्टमास्टर्स, हास्य कलाकार, गायक र अभिनेताहरूसँग धेरै लोकप्रिय छ। स्पीचमेकरले सबै प्रकारका वक्ताहरूलाई सिर्जना गर्न, अभ्यास गर्न, सुन्न र भाषण दिनको लागि आवश्यक सबै चीज दिन्छ।
अडियो वा भिडियो रेकर्डि। प्रयोग गरेर त्यो महत्त्वपूर्ण भाषण पुर्‍याउनु अघि तपाईले कस्तो सुन्नुहुन्छ भन्ने सुन्नुहोस् र सुन्नुहोस्। ताल र भावनाको प्रवाह पाउनुहोस्, तपाईंको बोली, कविता, व्याख्यान, आदि।
कुञ्जीशब्दहरू खोज्नुहोस् र हजारौं प्रख्यात भाषणहरूको डाटाबेसमा निर्मित भाषणहरू फेला पार्नुहोस्। SpeechMaker १०००+ भाषणको साथ आउँदछ र अधिक स arch्ग्रह गर्न सक्दछ जसले थप जानकारी जस्तै शीर्षक, लेखक, मिति र अडियो / भिडियो रेकर्डि। समावेश गर्न सक्दछ।
दुबै आईफोन / आईप्याड वा एन्ड्रोइड फोन / ट्याब्लेटमा चलाउन एक पटक खरीद गर्नुहोस्।
एक पटक खरीद गर्नुहोस् र तपाईंको सम्पूर्ण परिवारले यसलाई सेपको परिवार साझा प्रयोग गरी साझा गर्न सक्दछ।
आईओएस and र एन्ड्रोइडका लागि सुन्दर UI र फ्ल्याट ग्राफिक्स
तपाइँको भाषण सिरीलाई Speechmaker मा सीधा प्रवेश गर्न Dictate।
ठूलो आवाज विकल्प सिरी आवाज, लि gender्ग, भाषा बोल्नुहोस् र साथसाथै भाषणको प्रत्येक रेखा लाई हाइलाइट गर्नुहोस् यो स्वत: स्क्रोल हुँदा।
DropBox, Google ड्राइभ, र प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस् को माध्यम बाट पाठ, rtf, र pdf आयात गर्नुहोस्।
ड्रपबक्स र गुगल ड्राइव मार्फत अडियो र भिडियो आयात गर्नुहोस्
अडियो / भिडियो रेकर्डि .ले तपाईंलाई आफ्नो बोली अभ्यास गर्दा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
टेलिप्रोमिटरको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् नियन्त्रण गर्नका लागि, तपाईंको स्पिच र ठूलो स्क्रिनहरूमा प्रोजेक्ट गर्नुहोस्।
Different 36 विभिन्न भाषाहरू र सिरी ध्वनि मध्ये एकबाट छान्नुहोस्
बटनको फ्लिपको साथ विभिन्न रंगहरूमा हाइलाइट क्रिया, संज्ञा, विशेषण र भाषणको अन्य भागहरू हेर्नुहोस्
कागजातको रूप परिवर्तन गरेर, पृष्ठभूमि रंग, फन्ट, स्क्रोल गति, आकार, आदि नियन्त्रण गर्नुहोस्।
बटनहरू र इसारावहरू सुरू गर्न, रोक्न र स्क्रोल गति नियन्त्रण गर्न
+ स्क्रोलिंग गति गर्न दायाँ तिर ट्याप गर्नुहोस्। स्क्रोलि slow्ग ढिलो गर्न बाँया तिर ट्याप गर्नुहोस्
एक झलकमा भाषणको लागि समय बितेको समय, बाँकी समय र अनुमानित समय देखाउँदछ।
पढ्नुहोस्, सहि गर्नुहोस्, दिनुहोस्, खेल्नुहोस् र कुनै पनि समयमा र कहिँ पनि भाषणहरू रेकर्ड गर्नुहोस्। नेपकिन वा अनुक्रमणिका कार्डमा नोटहरूमा भरोसा गर्नु पर्दैन।
तपाईंको भाषणहरू तपाईंसँग सँधै सुरक्षित राख्नुहोस् र कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्नका लागि उपलब्ध। सजीलै परिवर्तन गर्नुहोस् र अन्तिम मिनेटमा भाषण दिनुहोस्।
तल स्पीचमेकरको स्क्रीनशट छ। यो दुबै आईफोन र आईप्याडमा पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप मोडमा काम गर्दछ। यससँग २ मुख्य विकल्पहरू छन्, तपाईं या त लाइभ मोड वा सम्पादन मोड प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
भाषण दिनको लागि लाइभ मोड वा भाषण सम्पादन गर्नका लागि सम्पादन मोड। सबै बिभिन्न सुविधाहरू / सेटि oneहरू एक वा अर्को मुनि फेला पार्न सकिन्छ।
यी दुई मोडहरू, सम्पादन र प्रत्यक्ष स्पीचमेकरसँग काम गर्ने कुञ्जी हुन्। तपाईं एक वा अर्को ट्याप गरेर पछाडि फर्केर स्विच गर्न सक्नुहुनेछ।
एक वास्तविक वा अभ्यास भाषण दिन लाइभ बटन थिच्नुहोस्। लाइभ मोडमा टाइमरहरू हेर्नुहोस् र अटोस्क्रोल गर्न, अडियो वा भिडियो रेकर्ड गर्न वा सिरीले ठूलो स्वरले बोलेको आवाज सुन्न सक्षम हुनुहोस्।
सम्पादन बटन ट्याप गर्नुहोस् भाषण सम्पादन गर्नका लागि, फन्ट, आकार, आवाज, आदि परिवर्तन गर्नुहोस् र विभिन्न पूर्वनिर्धारित सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस्।
तपाईं एक भाषण दिन चाहनुहुन्छ जब लाईभ बटन ट्याप गर्नुहोस्। तल नेभिगेसन बारमा तपाईले यी बटनहरू बाँयाबाट देख्नुहुनेछ। पहिलो जोडी सम्पादन / प्रत्यक्ष छ। जब एक मा छ अर्को बन्द छ।
जब लाइभ चयन गरिन्छ तब तपाईं यी बटनहरू तल एनएभी बारमा देख्नुहुनेछ:
सम्पादन गर्नुहोस् - यो बटन अचयन गरिएको छ। यसलाई ट्याप गर्नाले तपाईंलाई सम्पादन मोडमा लैजान्छ। सम्पादनले सबै प्रकारको सेटिंग्स आवाज, फन्ट, आकार, पृष्ठभूमि, आदि सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रत्यक्ष - यो हालै चयन गरिएको बटन हुनुपर्दछ यदि ट्याप नगरी यसले तपाईंलाई लाइभ मोडमा लैजान्छ। लाइभ भाषण दिनको लागि हेडअप डिस्प्ले जस्तो हो। शीर्षमा टाइमरहरू।
सिरी - यो छनौट गर्दा सिरिले पाठको हाइलाइट गर्दै र हालै चयन गरिएको भाषण ठूलो स्वरमा बोल्दछ। सिरी शुरू गर्न काउन्टडाउन हुनेछ।
रिक - रेकर्डि forको लागि छोटो तपाईंलाई अडियो वा भिडियो रेकर्डि .को विकल्प दिन्छ।
अटोस्क्रोल - एक विशेष गतिमा स्वचालित रूपमा भाषण स्क्रोल गर्दछ।
टिप: स्क्रोल वेगलाई मैन्युअल्ली परिवर्तन गर्नुहोस् जहाँसुकै बायाँ पट्टि ढिलो ट्याप गरेर छिटोको लागि।
प्रत्यक्ष मोडमा 'प्रत्यक्ष टाइमर' शीर्ष नेभ बारमा देखा पर्नेछ। बायाँबाट सुरु गर्दै पहिलो अनुमानहरू 'अनुमानित समय'। अर्को समय 'बितेको समय' र दायाँ शीर्ष 'समय बाँकी'।
जब तपाईं सम्पादन मोड छनौट गर्नुहुन्छ तपाईंले तल एनएभी बार देख्नुहुनेछ (माथिको)।
त्यहाँ तपाईंसँग फेरि सम्पादन वा लाइभ, सम्पादन स्पीच र horiz तेर्सो रेखा जस्तो देखिने आइकनको छनौट छ जसले साईड मेनू खोल्दछ जुन यस जस्तो देखिन्छ (तल) र भाषण, सिरी, रेकर्डि,, प्रोम्प्टर, र मद्दत चयन गर्न अनुमति दिन्छ।
मध्य बटन भनेको भाषण सम्पादन बटन हो जुन तपाईंले हाल चयन गर्नुभएको भाषण सम्पादन गर्दछ। नयाँ भाषण सिर्जना गर्न तलको प्यानलमा स्लाइडबाट भाषणहरू छान्नुहोस्। नयाँ भाषण वा सम्पादन र पुरानो प्रविष्ट गर्न अर्को विकल्प भनेको भर्चुअल कुञ्जीपाटीमा स्पेसबारको छेउमा माइक्रोफोन बटन थिचेर सिरि प्रयोग गरेर स्पीचमेकरमा डिक्ट्ट गर्नु हो।
दुई नयाँ बटनहरू बायाँ आइकनबाट छन् जुन horiz तेर्सो रेखा स्लाइडहरूको जस्तो देखिन्छ जसले साइड मेनू खोल्दछ जुन यस्तो देखिन्छ।
यी तल छलफल गरिएका छन्।
भाषण प्यानल (तल) सम्पादन मोडमा उपलब्ध छ। यहाँ तपाईं एक ट्याप, सिर्जना, आयात, निर्यात र एक भाषण मेटाउन एक भाषण चयन गर्न सक्नुहुन्छ। सिर्जना गर्नुहोस्, आयात गर्नुहोस्, निर्यात र मेटाउने बारे तल चर्चा गरिएको छ।
सिर्जना - तपाईंलाई आफ्नो भाषण सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। याद गर्नुहोस् कि तपाईंले कुञ्जीपाटीको बाँयामा श्रुतिलेख कुञ्जीलाई हिट गर्न सक्नुहुन्छ।
आयात गर्नुहोस् - गुगल वा ड्रपबक्स बाट भाषण। Files फाईलहरू आयात गर्न सकिन्छ, पाठ, RTF, PDF र HTML।
शेयर - ईमेल वा फेसबुक मार्फत। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
मेटाउन - चयन गर्नुहोस् र एक भाषण मेटाउन ट्याप गर्नुहोस्।
प्रत्येक भाषणको दायाँ (माथिको) निलो (i) बटनमा प्रत्येक शीर्षकको दायाँ तिर ट्याप गर्नुहोस् तलको संवाद हेर्न जुन लेखक, वक्ता, स्थान, मिति र समय विवरणहरू (तल) सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।
तिनिहरूको सेटिंग्स परिवर्तन गर्न मिति / समय, अवधि वा सिरिको दायाँमा निलो (i) बटन छनौट गर्नुहोस्।
भाषा, गति, पिच र भोल्युम परिवर्तन गर्न तलको संवाद हेर्न SIRI को दायाँ तिरको निलो (i) बटन चयन गर्नुहोस्। यी सेटिंग्स त्यो एक भाषणको लागि वा सबै भाषणहरूको लागि 'सबैको लागि पूर्वनिर्धारित' बटन सेट गरेर पूर्वनिर्धारित गर्न सकिन्छ।
SIRI को दाँया पट्टीको निलो (i) बटन चयन गर्नुहोस् समान अवधिमा अवधि र मिति को लागी सेटिंग्स सम्पादन गर्नका लागि।
माथी माथिको संवादमा एक अलग भाषणको लागि सेट गर्न सकिन्छ तर मेनूमा स्लाइडबाट पनि भाषणको लागि बोलाउन सकिन्छ।
आयात गर्नुहोस् mp3 वा .caf ढाँचामा अडियो।
निर्यात ईमेल मार्फत तपाईंको अडियो रेकर्डिंग अडियो चयन र निर्यात बटन हिट।
लाइभ दृश्यमा रेक वा रेकर्ड बटनले काउन्टडाउन पनि गर्छ अटो स्क्रोल सुरु गरेर अडियो रेकर्ड गर्दछ। जब तपाइँले रोक्नुहुन्छ यसले फाइल बचत गर्दछ र साउन्डवेभ सम्वादमा तपाइँलाई प्ले गर्न, निर्यात गर्न वा मेटाउनको लागि राख्दछ।
रेकर्ड अडियो बटन क्लिक गर्नुहोस् र एकै साथ रेकर्डिंग र अटोस्क्रोल सुरू गर्न। भाषण शीर्षक छ:
यो रेकर्डि ofको सुरूवातको मिति र समयको लागि हो। एक्सटेन्सन .caf एक एप्पल ध्वनि फाइल ढाँचा हो।
टेलिप्रोमिटर सेटिंग्स बाँया बाट स्लाइड र अनुमति:
तेर्सो - पाठ तेर्सो रूपमा मिरर गर्नुहोस्।
ठाडो - पाठ ठाडो रूपमा दर्पण गर्दछ।
हाइलाइट रंग परिवर्तन गर्दै - यो लाइभ मोडमा अटोक्रोलि duringको समयमा पाठको हाइलाइट र is्ग हो।
प्रत्यक्ष दृश्यमा यदि तपाईं अटोस्क्रोल बटन थिच्नुभयो भने भाषण तपाईले छनौट गरेको गतिमा स्क्रोल गर्न सुरु हुनेछ। दायाँ तिर स्पीड ट्याप बढाउन। स्क्रिनको बाँया पट्टिमा वेग ट्याप कम गर्न। यो प्रतिमा तपाइँ स्क्रोल गति प्रतिक्रिया दिन स्क्रीनमा देखा पर्नेछ।
'सम्पादन मोड' मा तपाईले दायाँ पट्टि देखिने साइड मेनू देख्नुहुनेछ। यस मेनूलाई माथि र तल तीरहरू तानेर तल सार्न सकिन्छ।
प्रत्येक बटनको दायाँ बटन ड्रयर जस्तै खुल्दछ। शीर्षबाट क्रमबद्ध गर्नुहोस् बटन:
स्क्रोलिंगको गति - लाइभ मोडमा भाषणको लागि पूर्वनिर्धारित स्क्रोल गति सेट गर्न ट्याप गर्नुहोस् र तान्नुहोस्।
फन्ट आकार - फन्ट आकार सेट गर्न तान्नुहोस्।
BG - पृष्ठभूमि को रंग चयन गर्नुहोस्।
फन्ट - फन्ट चयन गर्नुहोस्।
GM - व्याकरण बोलीको भागहरू दृश्यमान बनाउनुहोस्।
तिनीहरूलाई प्रयास गर्न प्रत्येकलाई ट्याप गर्नुहोस्। खोल्न ट्याप गर्नुहोस्, बन्द गर्न ट्याप गर्नुहोस्।
भाषणका अंशहरू शैक्षिक र राम्रा ठिक छन्, कृपया त्यो सुविधा प्रयास गर्नुहोस्। विद्यार्थीहरूको लागि महान।
अन्तमा माथिको र तल्लो अन्तमा एर्रोले तपाईंलाई ती उपकरणहरू ट्याप गर्न र ड्र्याग गर्न अनुमति दिन्छ पृष्ठमा माथि र तल तपाईंलाई मनपर्दो समायोजन गर्न।
आयात बटन क्लिक गर्नुहोस्। ड्रपबक्स र / वा गुगल कागजात तपाईको प्रमाण पत्र सेटअप गर्न क्लिक गर्नुहोस्।
Dropbox मार्फत आयात गर्नुहोस्
ड्रपबक्स भित्र यसले निम्नमा फोल्डर सिर्जना गर्दछ:
तपाईं यो फोल्डरमा फाईलहरू आयात र निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ। यस फोल्डरमा तपाईंको पाठ, PDF, RTF वा HTML फाइलहरू तान्नुहोस्।
तल प्यानलमा फेरि जानुहोस् फेरि ड्रपबक्स क्लिक गर्नुहोस् र फाइलहरू आयात गर्नुहोस् जुन तपाईं आयात गर्न चाहानुहुन्छ।
गुगल ड्राईव मार्फत आयात गर्नुहोस्
एक चोटि लग इन भएपछि गूगल ड्राईव फोल्डर / सबफोल्डर्समा सबै .rtf, .pdf, .htm / html र .txt फाइलहरू सूचीबद्ध गर्दछ। तपाईंले आयात गर्न चाहानुभएको फाईलहरू चयन गर्नुहोस्।
एक भाषण चयन गर्नुहोस् र ईमेल HTML मार्फत भाषण साझेदारी गर्न माथिको निर्यात बटन छुनुहोस्।
स्वत: स्क्रोल अप गर्न दायाँ तिर छुनुहोस्। यो प्रतिमा हेर्नुहोस्।
स्वतन्त्र स्क्रोललाई सुस्त बनाउनको लागि बाँया तिर छुनुहोस्। यो प्रतिमा हेर्नुहोस्।
पज वा जान मध्य केन्द्र क्षेत्र डबल छुनुहोस्।
दिशालाई द्रुत रूपमा सार्न वाचनलाई माथि वा तल फ्लिक गर्नुहोस्।
फन्ट आकार घटाउन पिन्च गर्नुहोस्।
फन्ट आकार विस्तार गर्न जुम गर्नुहोस्।
संलग्न ब्लुटुथ किबोर्डमा
माथि / डाउन कुञ्जीहरू स्क्रोलि works कार्य गर्दछ भाषण सम्पादन गर्ने क्रममा।
स्क्रिप्ट स्क्रोल गर्नुहोस् यसले तपाईलाई स्क्रोल गर्न नदिनुहोस् - स्वाभाविक रूपमा पढ्नुहोस्। तपाईंको पठन गतिमा अटोस्क्रोल समायोजित गर्नुहोस्।
सार्नुहोस्, सास फेर्नुहोस् र आराम गर्नुहोस् र मानिसहरूसँग कुरा गर्नुहोस्।
तपाईंको बोली अभ्यास गर्नुहोस्।
जोश र भावना राम्रो हो। यो उर्जा हो जुन तपाईंको बोलीलाई फीड गर्दछ।
आसन महत्त्वपूर्ण छ। सीधा खडा
आफ्ना हातहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईको स्क्रिप्टमा सांस, पोइन्ट, आराम गर्नुहोस्, जे पनि तपाइँ भाषण दिनुहुँदा तपाईलाई सम्झाउन चाहानुहुन्छ।
Q: टेलिप्रोम्प्टर्सको लागत $ 750० र अधिक। त्यहाँ टेलिप्रोमिटरको रूपमा स्पीचमेकर प्रयोग गर्न सस्तो तरीका छ?
A: उत्कृष्ट प्रश्न! जो एक टेलीप्रोमिटर वा क्यू जान्दैनन् उनीहरूको लागि टेलिभिजन स्टुडियोमा प्रयोग गरिएको उपकरण हो जुन व्यक्तिलाई क्यामेरामा सीधा हेर्न र स्क्रिनबाट स्क्रोलि text पाठ पढ्न अनुमति दिन्छ। यो तपाईले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरिरहेको देख्नु भएको छ त्यसैले उनीले आफ्नो भाषण सम्झन सक्छन् र क्यू कार्डमा नहेर्दा श्रोताको साथ आँखा सम्पर्क कायम राख्न सक्दछन्। एक टेलिप्रोमिटर प्रयोग गर्नाले तपाईंको पोडकास्ट, उत्पादन वा अन्य भिडियो धेरै पेशेवर देखिन सक्छ। अब, जो कोहीले टेलिप्रोमिटर किन्न सक्छन् वा यसलाई आफ्नो स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटको साथ प्रयोगको लागि बनाउन सक्दछन्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् धेरै मध्ये एकको लागि यो आफ्नै गर्नुहोस् (DIY) भिडियोहरू तपाईंको आफ्नै टेलप्रम्प्टर बनाउँदा।
Q: टेलिप्रोमिटर प्रयोग गर्ने बखत आँखाको आन्दोलनलाई कम गर्नका लागि केहि सुझावहरू छ?
A: हो, यो पाठकको आँखाबाट क्यामेराको दूरीमा हो। अधिक दूरी कम आँखा आन्दोलन। ठूलो पर्दा ठूलो स्क्रीन र फन्ट हुनु आवश्यक छ। ठूलो प्रकारको प्रयोग गर्नुहोस्।
Q: म देख्छु कि अडियो एक .caf मा बचत भयो जुन एक एप्पल ध्वनि फाइल ढाँचा हो। म कसरी म्याक / विन कम्प्युटरमा यसलाई ट्रान्सफर र प्ले गर्छु?
A: त्यो यहाँ कुरा गरिएको छ:
साथै गुगल क्याफेमा एमपी or वा एमपी c लाई क्याफमा वा केहि पनि त्यो नयाँ रूपान्तरण गर्न सबैभन्दा नयाँ स्वतन्त्र उपकरण फेला पार्न।
यदि तपाईंसँग सुझाव वा समस्या छ भने हामी तपाईंबाट सुन्न चाहन्छौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
SpeechMaker प्रयोग गर्नु भएकोमा धन्यवाद
बेर मा मान्छे आश्चर्यजनक
प्रतिलिपि अधिकार © २०१० - २०१ Pl प्लम अमेजिंग, LLC। सबै अधिकार सुरक्षित। गोपनीयता नीति / कानूनी। सबै सफ्टवेयरको लागि EULA यहाँ छ।
इन्जिनियरि & र टेक्नोलोजीमा महिलाका ११ प्रख्यात भाषणहरू
२०१7को most सबैभन्दा यादगार भाषण
शीर्ष तीन स्टीव कार्य भाषणहरू
२ Spe भाषण जसले विश्व परिवर्तन गर्‍यो
St 55 भाषण २१ औं शताब्दीका प्रभावशाली व्यक्तिहरूबाट
शीर्ष १० टेक कमेन्मेन्ट भाषण
"कम मूल्य भएको स्पीचमेकर अनुप्रयोगले प्रयोगकर्ताहरूलाई बनाउन, जाँच गर्न, पूर्वाभ्यास गर्न, रेकर्ड गर्न र समय भाषणहरू मद्दत गर्दछ। प्रसिद्ध प्रवचनहरूको ठूलो स collection्ग्रह समावेश गर्दछ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, एक पेशेवर तरीकाले तपाईंको आफ्नै सिर्जना र डेलिभर गर्ने उपकरणहरू। " - ग्राहम के रोडर्स, एक्सटेन्सनमा समीक्षा, //8०/१।